တရားဓမ္မ | The World of Pinkgold
Category Archives: တရားဓမ္မ
Posted on November 16, 2007 by cuttiepinkgold
ဆရာတော် ရှင်ဥာဏိသရ ဟောကြားတော် မူတဲ့ တရားတော်ကို ပြန်လည် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်
ပထမပိုင်း (ဖိုင်အမှတ် ၁ – 40MB)
ပထမပိုင်း (ဖိုင်အမှတ် ၂ – 32MB)
(ကိုနစ်နေမင်းဆီက ကော်ပီ လုပ်လိုက်တာပါ.. download လုပ်ချင်သူတွေ လုပ်နိုင်ပါပြီရှင်)
Filed under တရားဓမ္မ |	1 Comment
The Rules of beingahuman.
၁. သင်ဟာခန္ဓာကိုယ်ကြီးတစ်ခု ပိုင်ဆိုင်ရမှာပါ။
၂. သင်ဟာ သင်ခန်းစာတွေကို လေ့လာသင်ယူရပါလိမ့်မယ်။
သင်ဟာ ဘ၀ လို့ခေါ်တဲ့ ပုံစံမကျတကျ အချိန်ပြည့်ကျောင်းတော်ကြီးမှာ ကျောင်းအပ်နှံခြင်းခံရပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီကျောင်းကြီးမှာ နေ့စဉ်နေ့တိုင်း သင်ခန်းစာတွေကို လေ့လာသင်ယူရပါလိမ့်မယ်။ တစ်ခါတစ်ရံမှာတော့ အဲဒီသင်ခန်းစာတွေဟာ သင့်အကြိုက်ဖြစ်နိုင်သလို၊ တစ်ခါတစ်ရံမှာတော့လည်း ဒီသင်ခန်းစာတွေကို သင်ယူနေရတာဟာ မိုက်မဲလှတဲ့အလုပ်တစ်ရပ်လို့လည်း ထင်ချင်ထင်နေပါလိမ့်မယ်။
၃. မတော်တဆအမှားဆိုတာ မရှိပါဘူး။ သင်ခန်းစာတွေ ချည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
တိုးတက်ဖြစ်ထွန်းမှုဆိုတာ လေ့လာစမ်းသပ်မှုတစ်ခုရဲ့ ဖြစ်စဉ်တစ်ခုမျှသာ ဖြစ်ပါတယ်။ မအောင်မြင်(ကျရှုံး) တဲ့ စမ်းသပ်လုပ်ဆောင်မှု (လက်တွေ့သုတေသန)များသည် နောက်ဆုံးဖြစ်သော အလုပ် ဆီသို့ လက်တွေ့ စမ်းသပ်မှုဖြစ်စဉ်၏ အစိတ်အပိုင်းမျှသာဖြစ်သည်တဲ့
၄. သင်ခန်းစာတစ်ခုကို အလွတ်မရမချင်း ထပ်ကာထပ်ကာ သင်ယူရမှာပါ။
၅. သင်ခန်းစာတွေ သင်ယူခြင်းဟာ အဆုံးမရှိပါဘူး။
၆. သင်မျှော်လင့်နေသောအရာသည် လက်ရှိအရာလောက် မကောင်းပါ။
သင်ရည်မှန်းပြီး ကြိုးစားနေသော အရာတစ်ခုသည် သင့်လက်ဝယ်ကိုရောက်ရှိလာသောအခါ၊ သင့်အတွက် နောက်လိုချင်သော၊ အရေးကြီးသော၊ ယခုထက်ပိုကောင်းသောအရာတစ်ခု ပေါ်ပေါက်လာပေလိမ့်အုံးမည်။
၇. တစ်ခြားသူများသည် သင့်အတွက်မှန်တစ်ချပ်မျှသာ ဖြစ်သည်။
ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ချစ်သလား မုန်းသလားဆိုတာ တစုံတရာ တန်ပြန် မခံစားရသေးမချင်း တခြားလူအတွက် မင်း မချစ်နိုင်၊ မမုန်းနိုင်ဘူး။
၈. သင့်ဘ၀တွင် သင်လုပ်သောအရာမှန်သမျှသည် သင့်အပေါ်တွင်သာ မူတည်သည်။
သင့်မှာ သင်လိုအ်တဲ့ အရင်းအမြစ်တွေ၊ ကီရိယာတန်ဆာပလာတွေ အစုံရှိပါတယ်။ အဲဒါတွေကို အသုံးတည့်အောင် ဘယ်လိုအသုံးချမလဲဆိုတာကတော့ သင့်အပေါ်မှာပဲ မူတည်ပါတယ်။ သင့်ဟာသင် ရွေးချယ်ရမှာပါ။
၉. သင်ခန်းစာတွေသင်ကြားပြီး ဘ၀ရဲ့မေးခွန်းတွေအတွက် ဖြေဆိုဖို့ အဖြေဟာ သင့်ရဲ့ကိုယ်၊ စိတ်တွေထဲမှာပဲရှိနေပါတယ်။
သင်လုပ်ရမှာကတော့ ကြည့်ရှုပ်၊ နားဆင်ပါ၊ ယုံကြည်ပါ..စသောအရာတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
၁၀. နောက်ဆုံးမှာတော့ ဒါတွေအားလုံးကို မေ့မေ့ပျေက်ပျောက် ထားခဲ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Filed under တရားဓမ္မ |	2 Comments